Mogadishu Journal » 2021 » April » 8
Beesha caalamka oo go’aan culus ka soo saartay Shirkii fashilmay ee Afisiyooni (Akhriso)
WAR-SAXAAFADEED BEESHA CAALAMKA Saaxiibada Beesha Caalamka waxay ka welweleen war-saxaafadeedyadii mas’uuliyiinta qaarkood ay shalay la wadaageen bulshada kuna tilmaameen kulankii gogo-xaadhka iyo wadatashiga ahaa ee albaabadu u xidhnaayeen una dhexeeyay madaxda Dowladda...
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab & agabyo kale oo lagu soo qabtay Howgal (Sawirro)
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa hawlgalo baaritaan ah ka sameeyey degaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha hoose Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in hawgalkan ujeedkiisu ahaa burburin goobaha ay Al-shabab ka dhigtaan gabaadka, waxaana guri guri loo baaray...
PSG: Mbappe ayaa keenay guusha Bayern
Kylian Mbappe ayaa shaaca ka qaaday “Halkan uma joogo inaan qariyo” iyadoo weeraryahanka uu ka digay inuu diyaar u yahay inuu waxyeelo badan u geysto Bayern Munich ka dib markii uu ku dhiirrigeliyey Paris Saint-Germain inay guul 3-2 ah ka gaaraan lugtii hore. PSG ayaa bilaabi...
Taliska Booliska Somalia oo War ka soo saaray caruur Meydkooda laga helay Baydhabo
Muqdisho:-Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyed ayaa ka hadlay Laba caruur ah walaalo ah oo saaka aroortii meydkooda laga heley duleelka Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay. Caruurtaasi oo wiil iyo gabar ahaa Cabdul-Mudcim Aweys C/llaahi oo 9 sano jir ah iyo Aamina Aweys C/llaahi...
(Sawirro) Ra’isul Wasaaraha Somalia oo heyadaha amniga ku amray feejignaan
Muqdisho:-Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay amniga, abaaraha iyo saameynta Caafimaad ee dalka uu ku yeeshay Safmarka Covid-19. Golaha Wasiirada ayaa warbixinno la...
Booliska ayaa sheegay in shan qof oo ay ku jiraan labo caruur ah ay ku dhinteen toogasho ka dhacday gobalka South Carolina ee dalka Maraykanka War ka soo baxay Booliska ayaa intaas ku daray in qof kale oo dhaawac halis ah uu kasoo gaaray weerarka loo qaaday isbitaalka. Dadka...
The Biden administration will restart more than $200m in aid to the Palestinians, including restoring funding to UNRWA. 8 Apr 2021 The Biden administration has announced plans to resume funding for the United Nations agency that supports Palestinian refugees, which has faced a...
Muqdisho:-Waxaa maanta dhamaaday shirkii hordhaca ahaa ee Madaxda DF iyo dowlad goboleedyada mudada saddexda cisho ah uga socday magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayey ajendaha shirka soo socda ee looga hadlayo shirka doorashooyinka. Wasiirka Warfaafinta Somalia Cusmaan Dubbe...
Waxaa maanta guuldaro ku dhamaaday shirkii hordhaca ahaa ee Madaxda DF iyo dowlad goboleedyada mudada saddexda cisho ah uga socday magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayey ajendaha shirka soo socda ee looga hadlayo shirka doorashooyinka. Wasiirka Warfaafinta Somalia Cusmaan Dubbe...